Waxyaabaha lagu sameeyo lammaanahaaga: waaya aragnimadii ugu fiicneyd ee wada jir | Ragga Stylish
Waxyaabaha lagu sameeyo lammaanahaaga
Markaad kujirto lamaanahaaga waxaa jira xaalado aadan aqoon waxa aad sameyso si aad ugu raaxeysato adigoo ogaanaya wax jaceyl ah. Gaar ahaan markii aad bilowdo xiriir waxaa jira xaalado, laga yaabo, inaan dib loo soo celinaynin maadaama ay yihiin kuwo gaar ah oo sixir ah. Waxaa jira kumanaan waxyaabaha aad ku samaynaysid lammaanahaaga in la wada baashaalo iyo in la xoojiyo isku kalsoonaanta labada dhinac.
Qormadan waxaan kuugu sheegaynaa waxa ugu wanaagsan ee lamaanahaaga lagu sameeyo.
1 Waxyaabaha lagu sameeyo lammaanahaaga hab qasab ah
2 La wadaag hiwaayadaha iyo daqiiqadaha
3 Waxyaabaha lagu sameeyo lammaanahaaga: dhis kalsoonida
Waxyaabaha lagu sameeyo lammaanahaaga hab qasab ah
Markii aan xoog ku dhahno waxaan dhahnaa waa waxqabad sida caadiga ah udhacda noloshaada. Midkood ayaa wax wada karsada. Khibradda wax wada karinta waa mid ka mid ah waxyaabaha qani ku ah xiriirka. Xaaladaha badanaa waa la dejiyaa oo aad awoodid xooji xiriirada badan adoo noqda kuwo firfircoon, baashaal leh oo xamaasad buuxda.
Sidii aan ku soo sheegnay bilowgii maqaalka, waxaa jira xaalado u gaar noqon doona marka aad lammaanahaaga muddo dheer la joogto. Mid ka mid ah waxyaabaha lagu sameeyo lammaanahaaga, gaar ahaan bilowga xiriirka, waa hadal habeenki oo dhan. Markaad qof uun la kulmeyso, waxaa qurux badan inaad habeenkii oo dhan wada sheekaysatid, isbaratid oo aad midba midka kale u sheegto khibradaha gaarka ah iyo kuwa xiisaha leh ee ay nolosha ku soo mareen. Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha badanaa loo sameeyo sidii lamaane aan la ilaawin.
Dabcan, isla safrida waa mid kamid ah waxyaabaha lamaanahaaga lagu sameeyo oo aad loogu raaxeysto laguna xasuusto. Looma baahna oo waa laga fogaanayaa. Kaliya waa inaad u qoondeysaa usbuuc dhammaad si aad u barato magaalo u dhow halka loo socdo. Wada noolaanshaha iyo rabitaanka barashada dhaqamada ka imanaya meelaha kale ayaa badanaa kiciya dhismaha xusuus qaali ah oo ku wareegsan xiriirka.
In kasta oo ay u eg tahay doqonnimo, haddii shaqada ka dib ama aad leedahay mas'uuliyado badan dhammaadka maalinta aad rabto inaad degto oo aad ku raaxaysato pizza wanaagsan iyo raaxada sariirta, iska ilow khalkhalka loo sameeyay in lagu cuno qolka oo lagu raaxeysto cuntadaas. Kani waa shaashad aan caadi aheyn, majaajillo jaceyl ah oo ka mid noqon doonta waxyaabaha aad ugu jeceshahay inaad lammaanahaaga ku sameyso.
La wadaag hiwaayadaha iyo daqiiqadaha
Waa in lagu xisaabtamo in lamaane kasta ay jiraan dhadhan wadaag. Qaarkood waxay yiraahdaan haddii lammaanuhu aad uga duwan yahay kan kale, way shaqeyn kartaa maadaama ay kala yihiin. Si kastaba ha noqotee, marka ay jiraan taxane badan oo isku mid ah, way fududaan kartaa in la abuuro khibrado lana wadaago daqiiqado. Mid ka mid ah hababka loo wadaago dhadhamka oo hadhow khibrado isku mid ah loo yeesho waa in la akhriyo isla buugga. Akhrinta isla buuggu ma kordhin doono oo keliya heerarka dhaqankaaga, laakiin waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad isku barataan heer kale. Markay labaduba dhammeeyaan buugga waxaa lagugula talinayaa inaad ka tagto galab si aad ugala hadasho oo aad u hesho fikradaha kan kale. Mid kamid ah qorshayaasha ugufiican ee lammaane loo sameeyo.
Teknolojiyada ayaa raaxo badan u keentay lamaanayaasha. Iyada oo ay jiraan dhammaan aaladaha da'da dhijitaalka ah ee ay tahay in lagu daawado telefishanka, waxa keliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad tiraahdaa taxane aad labadiinuba rabto inaad aragtaan oo aad saacad u qoondeeysid maalin kasta si aad ula socoto. Marka ay timaado sameynta maaratoonka taxanaha ugu xiisaha badan, ma mudna cutubyo gooni ah. Taasi waa mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay in si wada jir ah loo qabto.
Dhaqanku sidoo kale wuxuu aasaas u yahay xiriirka. Sidoo kale waa la wadaagista khibradaha qofka aad jeceshahay. Si midowga loo sii xoojiyo marba marka ka dambeysa, subaxnimada a Sabtida si aad u tagto xarun taariikhi ah ama aad ugu tagto safarka madxafka. Mid ka mid ah qorshayaasha la qaban karo oo lammaane ah oo si aad ah isugu milmaya booqashada matxafyada ayaa ah in maalinta lagu dhammeeyo kafee wanaagsan.
Waxyaabaha lagu sameeyo lammaanahaaga: dhis kalsoonida
Kalsoonida oo ah hubka ugu fiican ee lagu xoojiyo xiriirka. Sidaa darteed, u sheegista lamaanahaaga wixii ku saabsan saameynta ugu dhow waxaa loo isticmaali karaa in lagu dhiso wax aad u qurux badan. Xiriirka, kalsoonidu waa muhiim. Haddii ay jiraan wax uusan wali lamaanahaaga aqoon oo aad u maleyneyso inaad ogaato, waxaa fiican inaad u sheegto. Tani waxay gacan ka geysan doontaa sidii loo jebin lahaa caqabadaha iyo in la is barto si ka qoto dheer.
Jimicsiga wada jirku wuxuu noqon karaa fikrad aad u wanaagsan xitaa haddii inbadan aysan ka fikirin. Waa wax caadi ah in la arko lamaanaha qaar oo jimicsiga wada aada oo dadku waxay dhahaan waxaa fiican in si gooni gooni ah loo kala baxo si aysan wax walba u wada qaban. Si kastaba ha noqotee, waxay noqon kartaa in labada u dhexeysa ay yeelan karaan anshax marinta si gooni ah oo aysan awood u lahayn inay lahaadaan. Sidoo kale waa inaad ka faa'iideysataan si aad midba midka kale ugu dhiiri galiyo inuu tababar adag qaato oo midba midka kale ka caawiyo sidii kor loogu qaadi lahaa mashiinnada iyo baararka.
Waxyaabaha lagu sameeyo lammaanahaaga oo aan soo sheegnay, waxaan tixraacnay safar yar. Waxaa la mid ah qaadashada safar dheer. Waxay aadi doonaan safar meelo fog fog waxayna u dhimanayaan inay la kulmaan. Ma jiro wax xadidan, kaliya waa inaad sameysataa miisaaniyad, aad doorataa hudheel oo aad ku raaxeysataa lamaanaha iyo safarka. Badanaa safarka noocan ah in wax badan ayey isku xidhaan maadaama ay wakhti ku noolaanayaan meel aan ahayn aagga raaxada. Sidan oo kale, meel gebi ahaanba fog, waad is wada leedihiin oo keliya. Tani waxay wax badan ka caawineysaa xoojinta xirmooyinka kalsoonida.
Cunnooyinka makhaayadaha ee xiisaha leh had iyo jeer waxay ahaayeen xulasho wanaagsan oo ka mid ah waxyaabaha lagu sameeyo lammaanahaaga. Uma baahnid inaad ka walwasho kharashka la galayo, laakiin waxaad diirada saartaa dhadhaminta suxuunta macaan, cabitaanka shukaansiga iyo jeclaanta jawi gebi ahaanba kaa shisheeya. Qorshahan waxaa lala xiriiri karaa inta kale habeen wada cabitaan ah iyo wada hadalo xilli dambe ah ilaa waagu ka baryo. Subaxda hore waa goobta ugu fiican ee lagu raaxeysto lamaanaha. Waa mid ka mid ah waxyaabaha ay sameeyaan lamaanayaashu kuwaas oo kugu kalifin doona inaad si aad ah ugu sii biirto.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto waxyaabo badan oo ku saabsan waxyaabaha ku saabsan lammaanahaaga iyo faa'iidooyinka ay kugu leeyihiin adiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Waxyaabaha lagu sameeyo lammaanahaaga
Frenulum gaaban oo nin ah